“Waxaan ahay nin, dumarkana waan ka umuliyaa” - BBC News Somali
Image caption Dilan Chauhan
Muddo 40 sano ayaa laga joogaa markii dalka UK ragga loo ogolaaday in ay dumarka ka umuliyaan, balse wali tiro aad u yar ayaa rag ah umulisooyinka ka shaqeeya isbitaalada.
Markii ay foosha qabatay Michelle-Grace Osobase ee isbitaalka la geynayay, ma aysan filaynin wax iyada yaab galiya, wuxuuna ahaa ilmaheedii saddexaad oo ay isbitaalkaas ku dhasho.
Balse waxaa jiray hal sheey oo aysan marnaba filanaynin, waxayna aragtay hal qof oo ka duwan shaqaalihii isbitaalka ee hawsheeda ku jiray.
Si ka duwan boqolkiiba 99.6% shaqaalaha dumarka ka umuliya ee ka diiwaangashan UK, qofkani waa rag.
Michelle-Grace oo lafteeda ah kalkaaliso caafimaad waa ay ka warqabtay in umulisooyinka qaar ay yihiin rag, balse marnaba ma aysan filanaynin in ay iyada ku dhici doonto.
Waxaa lagu magacaabaa Dilan Chauhan, waa nin dhisan oo itaal leh, wuxuuna ciyaari jiray kubbada hardanka (rugby), waxana uu ka hawlgalaa isbitaalka Jaamacadda Lewisham ee Koonfurta London.
Image caption Michelle-Grace and Dilan
Michelle-Grace ayaa sheegtay in markii ay wajigiisa eegtay ay ka muuqatay naxariis, kadibna ay go'aansatay bal in ay tijaabiso in uu ka umuliyo nin.
dumar badan ayaanan jeclayn in ay rag ka umuliyaan, balse marka ay timaado xirfad iyo duruuf caafimaad, ma ahan mid la diidi karo.
Dilan waxa uu ogyahay in dumarka intooda badan aysan ogolayn in uu nin ka dhaliyo, haddii Michelle-Grace ay diidi lahaydna ma uusan dhibsadeen.
Muddadoo labada sano ahayd ee uu shaqaynayay Dilan, waxa uu ka dhaliyay boqolaal dumar ah, waxaana diiday 7 oo kaliya.
Marka ay diido haweenay, waxa uu isu yeelaa shaqo kale, sida isaga oo usoo sameeya koob qaxwo ah oo uu u dhigaa qolka isbitaalka hortiisa.
Markii uu dhiganayay jaamacadda caafimaadka ee King's College ee London, waxa uu ahaa qofka kaliya ee ragga ah ee maadada umuliso nimada baranayay, fasalkiisa oo 97 qof ka koobnaa.
Dilan waxa uu sheegay in dumar badan oo uu ka umuliyay ay la dhaceen adeegiisa, islamarkaasna ay ku dhiirogaliyeen shaqada uu hayo.
Ma jiro qof filayay in uu dumarka ka umulin doono, qoyskiisa, iyo xitaa saaxiibadiis.
Markii uu korayay, ma uusan arag caruur badan, ilmaha la dhashay oo dhan waa ka weynaayeen, sidoo kale ma jirin qof qoyskiisa ka tirsan oo xirfad caafimaad bartay.
Waalidkiisa oo kasoo haajiray dalka Kenya waxa ay noloshooda ku dhiseen ganacsi daabacaad ah oo ay meel hoose ka bilaabeen.
Iskuulka markii uu dhiganayay maaddooyinkii uu jeclaa waxay ahaayeen kuwa fanka ah iyo siyaasadda. Walaashiis ka weyn waxa ay ahayd qofkii koowaad oo qoyskooda oo jaamacad ku biira.
Isaga waxa uu filayay in uu baran doono sharciga ama waxyaabo kale, balse maalin isaga oo rogaya baalasha buug-yare ka hadlaya maadooyinka jaamacadaha laga barto ayaa waxaa usoo baxay cutub ka hadlaya umulisonimo.
Hooyadiis oo agtiisa fadhiday ayuu kula kaftamay "hooyo ka warran haddii aan umuliso noqdo".
Qarnigii 16aad ayay soo bilaabatay in xirfadda umulisonimada ay ragga bartaan, kuna shaqeeyaan, waxaana xitaa jira diiwaan caan ah oo xirfadan laga tixraaco oo uu qoray ninka lagu magacaabo William Smellie oo Scotland u dhashay.
Image caption Dilan Chauhan oo ku sugan isbitaalka jamaacadda Lewisham
Sanadkii 1976-dii ayaa dalka UK laga sharciyeeyay in ragga ay ka shaqayn karaan xirfaddan.
Dhibka jira ayaa ah in ragga bartay xirfadan aysan shaqooyin ka helin isbitaalada, ee aan ahayn kuwa tabobarka lagu qaato.
Ninka lagu magacaabo Paul Lewis ayaa markii uu jaamacadda ka qalin jabiyay sanadkii 1980-kii waxa uu codsi shaqo u dirsaday isbitaal, magaciisana waxa uu kusoo koobay P Lewis.
"maalmo kadib waxaan heley warqad jawaab ah oo oranaysa Marwo P Lewis waan ku faraxsanahay in aan kuugu yeerno imtixaam', balse markii ay ogaadeen in aan nin ahay, aad ayay u naxeen, waxayna i siiyeen shaqo aan ahayn tii aan codsaday ee umulisonimada" ayuu yiri Paul.
Image caption Michelle-Grace iyo Dilan
Dilan markii uu waalidkiis u sheegay go'aankiisa in uu barto xirfadan waa ay ku taageereen, balse macalimiintiisii iskuulka ayaa su'aalo ka keenay, halka marka uu la joogo saaxiibadiisna uu ka fogaan jiray moowduucan in uu ka hadlo.
Markii uu jaamacadda tagay, ma ahayn wax sahlan in uu kaligiis yahay qofka ragga ah ee dhex fadhiya dumar badan.
"Qof kasta oo ardayda ka mid ah waxa uu isweydiin jiray waxa igu kalifay in aan xirfadan barto, aad ayay iiga sheekeysan jireen" ayuu yiri Dilan.
Maalintii ugu horaysay oo uu shaqada usoo xaadiray Dilan, waxaa la aqoon waayay qolkii uu dharka isaga badali lahaa, maadaamaa uu jiro qol ay dumarka oo kaliya dharka isaga badalaan.
Intaas oo caqabada ah oo uu soo maray kadib, Dilan maanta waa shaqaale caafimaad oo aad loo tixgaliyo, shaqadiisana ku faraxsan.
Dilan hadda waxa uu kaa mid yahay 188 rag ah oo xirfadan u diiwaangashay dalka UK, halka dumarka ay dhanyihiin 43,168 qof.
Mise ahan shaqo hawl yar, saacadaha waa kuwa badan, waxaana inta badan la shaqeeyaa xiliga habeenkii ah, mushaarkana ma ahan mid aad u badan, sidaas oo ay tahay Dilan waxa uu ku faraxsanyahay shaqadiisa.